Maxay beesha caalamka ka tari kartaa xaaladda ka taagan Soomaaliya? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Maxay beesha caalamka ka tari kartaa xaaladda ka taagan Soomaaliya?
February 22, 2021 at 08:38 Maxay beesha caalamka ka tari kartaa xaaladda ka taagan Soomaaliya?2021-02-22T08:38:44+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
5 Daqiiqadood ka hor
Waxaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu kulan ka yeesho siyaasadda cakiran ee Soomaaliya, kadib rabshadihii todobaadkii hore ka dhacay caasimadda Muqdisho.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan, ayaa khudbad ku aaddan marxaladihii u dambeeyay ee dalka ka jeedin doona kulanka.
Muqdisho waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed kuwaas oo shalay kulan la yeeshay madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha dowladda Federaalka.
Kulanka waxaa ka maqan madaxda Puntland iyo Jubaland oo la filayay inay ka qeybgalaan shirka looga arinsanayo talo-jeedinta guddigii farsamada ee bartamihii bishan ku shiray magaalada Baydhabo.
Jubaland ayaa shuruudo horleh ku xirtay ka qeybgalka shirka, iyadoo sheegtay in ammaanka caasimadda aan la isku haleyn karin kadib iska horimaadkii ciidamada dowladda iyo kuwa musharraxiinta mucaaradka ku dhexmaray Muqdisho.
Jubaland State House
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullahi Deni, oo xalay hadal ka jeediyay xarunta cilmi-baarista PDRC ee Garowe ayaa muujiyay in hadda uusan diyaar u ahayn ka qeybgalka shirkaas.
“Waxaa meesha soo socda niman International la yiraahdo oo FMS iyo FGS ha isu yimaadaan ku haya. Wadamadooda waxay u qorayaan iyaga ayay jirtaa, laakiin waxaan idiin sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku metali karo anigu aadi mayo,” ayuu yiri Deni.
Kulan ay madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadiir ay Muqdisho isugu tagaan 18-kii bishan ayaa la filayay in dhinacyada ay ku kala saxiixan doonaan heshiiska ay gaareen guddiga farsamada.
Jibril Cali Aw Maxamed oo culuunta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ayaa qaba in Beesha Caalamka ee ku lugta leh Soomaaliya aanay sidii hore ahayn.
“Doorashooyinkii hore waxaa gacanta kula jiri jiray beesha caalamka oo kaalin muuqata ku lahaan jirtay. Beesha caalamka hadda waxaa ku dhacay isbedal oo Igad, gaar ahaan Itoobiya dhibaato ayaa dhaxdeeda ka taagan. Maraykanka iyo Ingiriiskana dhibaatooyin u gaar ah ayaa soo maray oo bedalay hadafkooda. Marka beeshii caalamka ayaa kala aragti ah marka laga hadlayo arimaha Soomaaliya,” ayuu yiri Jibril.
Aqoonyahankan ayaa rumaysan in faragelinta beesha caalamka ay lama huraan tahay.
“Inta badan beesha caalamka waxa ay aaminsan yihiin in arimaha Soomaaliya Soomaalida faraha looga qaado, oo ay go’aan ka gaaraan sida masiirkooda ay ka yeelayaan, halkii markii hore ay ahaan jirtay in wax loo yeeriyo Soomaaliya. Wey soo faragelin doontaan, balse saameyntii hore ma yeelan doonaan,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Mudada xilheynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8-dii February. Mucaaradku waxay sheegeen inaysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashadu dhici doonto.
« Solskjaer Oo Xaqiijiyay Xiddig Kooxdiisa Ah Oo Dhaawacmay.
WHO oo Tanzania Ku Boorrisay In ay Shaaciso Xogaha Ku Saabsan Xanuunka Covid-19 »
DEG-DEG: Xiddigaha U Tartami Doona Abaalmarinta Xiddiga Ugu Fiican Bishii February Ee Premier League Oo La Soo Saaray.
Man City Oo Kaliya 3 Saxiix Ku Soo Dari Doonta Kooxdeeda Xagaaga.
Weeraryahan Mise Daafac Dhexe? Bartilmaameedka Ugu Muhiimsan Man United Suuqa Xagaaga Oo La Ogaaday.
Turkiga oo Cambaareeyay Weerar Xalay Ka Dhacay Muqdisho
Mo Faarax oo Tartan Kale Ku Guuleystay